Roman Abramovich Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
AllCiyaartoyda Kubadda Cagta BelgiumCiyaartoyda Kubadda Cagta ee CroatianCiyaartoyda Kubadda Cagta DenmarkCiyaartoyda Kubadda Cagta HollandCiyaartoyda Kubadda Cagta FaransiiskaCiyaartoyda Kubadda Cagta JarmalkaCiyaartoyda Kubadda Cagta TalyaanigaCiyaartoyda Kubadda Cagta ee BoortaqiiskaCiyaartoyda Kubadda Cagta Spain
Sheekada Carruurnimada Florentino Luis Plus Xaqiiqooyinka Udinld Biography
Sheekada Carruurnimada Raphael Guerreiro Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Marcus Thuram Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Yacine Adli Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Uurka ee Aan La Qadarin
Home ASIAN FOOTBALL STORIES Roman Abramovich Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Cusboonaysiinta ugu dambeysay April 12, 2020
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee Kubadda Cagta ee ugu Fiican "Ruushka Ruushka". Dabeecadeena Roman Abramovich iyo sheeko xariifin aan toos ahayn ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo oo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqayntu waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor inta caan ka ah, asalka qoyska, nolosha xiriirka iyo qaar badan oo OFF iyo ON-football oo aan runta loo yaqaan ee ku saabsan isaga.
Haa, qof walba wuu ogyahay asalkiisa jiheeynta uu ku leeyahay kooxda Chelsea Football Club. Si kastaba ha ahaatee, kaliya wax yar ayaa ka ogaanaya Abramovich Bio taas oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan ado kale, aan bilaabi.
Roman Abramovich Ilmihii Hore Sheeko Xogta Loo Baahan Yahay -Nolosha Hore
Bilaabidda, magacyadiisa buuxa waa Roman Arkadyevich Abramovich. Abramovich wuxuu ku dhashay 24th Oktoobar 1966 ee Saratov, Russia. Wuxuu ku dhashay aabihiis, Arkady Abramovich (maamulaha xafiiska gobolka) iyo hooyadiis, Irina Michalenko (shaqeeye).
Inkastoo Abramovich uu si caddaalad ah u bilawday noloshiisa intii uu ku dhashay asal ahaan reer Rooma. Waqtiga carruurnimada ayaa hoos u dhacay ka dib dhimashadii hooyadiis markii uu ahaa kaliya 18 bilood. Bishan ka dib, Abramovich wuxuu ka lumay aabihiis, horumar horumarineed oo agoon ahaa ka hor inta uusan da'diisu ahayd 3.
Ilmo kasta oo ku noolaa lumitaanka labadaba labada waalid ayaa ogaan doona oo keliya xanuunka dareenka qoto dheer ee uu keeni karo. Dhibaatada cawaaqibka nafsaaniga ah ayaa timid iyadoo lumisay Abramovich waalidiintiisa. Saameyntu waxay si cad u saameyn ku yeelatay horumarkiisii ​​uu ku sugnaa muddadii carruurnimada hore.
Nasiib wanaag, adeerkiis, Leib wuxu mas'uul ka ahaa Abromovich ee barbaarinta iyo wuxuu u qaaday Ukhta, oo ah magaalooyin muhiim ah oo ku yaala Jamhuuriyada Komi ee Ruushka.
Roman Abramovich Ilmihii Hore Sheeko Xogta Loo Baahan Yahay -Education
Young Abramovich wuxuu u egyahay ilmo badan oo da'diisa iyo asalkiisa, oo ku qoran Dugsiyada Dadweynaha ee Ukhta (Sawirka hoose). Si ka duwan jinsiyaddiisa, waxa uu lahaa dareen dareen ah oo ganacsi ah, oo ah tay wax u qabatay isaga oo aqoonsaday muhiimada lacagaha iyo faa'iidooyinka laga helay inay ka badbaadiyaan.
Dhab ahaantii, muddo dheer ma aysan dhicin ka hor intaanan bilaabin adduunka ganacsi adoo iibinaya qalabka caruurtu ku ciyaarto iyo taayirada caddaaladda loo adeegsado iyadoo uu sii wato waxbarashadiisa uu ka qaato kulliyadda farsamada ee Ukhta, ka dibna Moscow, ee Machadka Gubkin ee Saliida iyo Gaaska.
Roman Abramovich Ilmihii Hore Sheeko Xogta Loo Baahan Yahay -Adeega Milateri
Abramovich wuxuu ku khasbanaaday in uu soo gabagabeeyo raadinta tacliinta ka dib markii loo qoondeeyay adeegga milatari ee khasabka ah ee 1974.
Intii lagu jiray tababarka, Abramovich ma uusan tixgelinin xirfad milatari oo ku filan. Taa baddalkeeda, waxa uu macnaheedu yahay in ganacsigiisu uu ku kalsoon yahay isticmaalka wanaagsan iyada oo la sameeyo saraakiil bilays ah oo aan loo fasaxin.
Sharcigu wuxuu awood u yeeshay inuu kor u kiciyo oo uu lacag badan u keydiyo mustaqbalka. Waxa kale oo ay calaamad u tahay qorshaha sharci-darrada ah ee ugu horreeya ee la xidhiidha hantidiisa.
Roman Abramovich Ilmihii Hore Sheeko Xogta Loo Baahan Yahay -Shirkadda First
Inkastoo Abramovich laga yaabo inuu lumiyo qorsheyaal badan oo sharci darro ah, wuxuu si qurux badan u sameeyay inuu hubiyo in shirkadiisa koowaad, Co-op Raaxada (samaynta alaabta lagu ciyaaro caaga) ayaa lagu aasaasay sharci ahaan.
Guusha shirkadda qalabka ciyaaraha waxay u saamaxday in uu u gudbo hawlgallo kale oo ay ka mid yihiin bilaabitaanka ganacsigii saliida ee ugu horreeyey gobolka Omsk.
Roman Abramovich Ilmihii Hore Sheeko Xogta Loo Baahan Yahay -Kacsanow inaad ku guulaysato
Waxaa la sheegayaa in guushu dhacdo marka diyaargarowgu uu ka soo baxo fursada, maxim ah oo si fiican u ciyaaray markii uu jiray Mikhail Gorbachov (Madaxweynihii hore ee Midowga Soofiyeeti) ayaa albaabka u furay hannaanka gaarka ah ee 1980s. Abramovich wuxuu ku qadaray fursad uu isaga kaashado ganacsiyada badan sababo faa'iido leh.
Dhawr ka dib, wuxuu ka heley raashin Berezovsky - oo ah ganacsade oo xiriir dhow la leh madaxweynihii hore ee Ruushka Boris Yeltsin.
Waxay labaduba sameeyeen ganacsi iyo siyaasado badan oo muhiim ah. Abramovich saaxiibtinimada Berezovsky ayaa la siiyay Launchpad, isaga oo raalli ka dhigay ragga xoogga leh, isaga u dejiyey guri dabaq ah oo ku yaal Kremlin wuxuuna u suurtageliyay ganacsiyo dheeraad ah oo ka soo baxay alaabooyinka saliida beeraha doofaarka iyo xitaa kaydka xajinta. Inta kale, sida ay yiraahdaan, waa taariikh.
Roman Abramovich Ilmihii Hore Sheeko Xogta Loo Baahan Yahay -Nolosha Xiriirka iyo Furiinka Khatarta ah
Abramovich waa mid ka mid ah faa'iidada ganacsiga ee ka dhaxeeya xiriirkiisa uu la leeyahay dadka kale oo ay ka mid yihiin guurka. Waxa uu markii hore uuraysatay Olga. Guurka ayaa gacan ka gaystay guushii guusha shirkadda qalabka ciyaaraha ee sida uu u joogo xaaska arooska ee 2,000 waxaa loo isticmaalay isticmaalka wanaagsan ee bilyaneerka Ruushka isagoo ballaadhinaya saamigiisa.
Nasiib darro, lammaanaha is furay ee 1990 (saddex sano kadib guurka). Abramovich xiriirka soo socda ma aysan caddeyn inuu faa'iido u leeyahay. Waxa uu la kulmay oo uu guursaday haweeney haweyn ah, Irina (sawirka isaga oo hoos ku qoran).
Ugu horreyntii, dhammaantood waxay u muuqdeen wakhti fiican ka hor intaanay is fureen sababtoo ah waxa uu ku eedeeyay in ay ku lug leeyihiin qaabka Ruushka ah ee 23-da, Dasha Zhukova. Kala bedelashada qaaliga ah (qiimihiisu £ 155million) wuxuu arkay Abramovich oo waayay xannibaadiisa caruurtiisa 5 iyo sidoo kale in la cuno gurigiisa oo uu ku lahaa boqortooyadii boqortooyada Ingiriiska. Intaa waxaa dheer, wuxuu ka lumay xaddiga maal-gashiga caasimadiisa. Xaqiiqdii, noloshu maaha Nintendo maaddaama mid ka mid ah nasiib ma helayo mar walba.
Hase yeeshee, waxay u egtahay in Oligarch uu leeyahay arin khaas ah oo furan iyadoo uu 2017 ku soo afjaray xidhiidhkiisa Dasha Zhukova (gabadha masuulka ka ah shilkeedii guurka labaad). Qiimaha kala goynta ee lagu qiimeeyay $ 9B waxay ku xiran tahay dad badan, Ingiriiska ugu weyn. Xiriirkooda, si kastaba ha ahaatee, waxay keeneen dhalashada wiil.
Waqtigaas ka dib. wax yar ayaa lagu yaqaan Abramovich xiriirka xiga.
Roman Abramovich Ilmihii Hore Sheeko Xogta Loo Baahan Yahay -Ka qaybgalka Siyaasadeed
Abramovich xiriirka dhow ee ragga xoogga leh ee Ruushka ma ahan sabab. Ka qayb qaadashadooda siyaasadeed waxay ku fureen oligarchy dhalinyaro ah oo siyaasad ahaan u noqday siyaasad ahaan wakiilka Chukotka Autonomous Okrug, gobolka saboolka ah ee Bariga Dhexe ee Ruushka.
Inkastoo uu u shaqeynayay wakiil, Abramovich wuxuu bilaabay samafal u horseeday samafal si loo yareeyo faqriga gobolka, taasoo ah qorshe ka mid ah waxyaabihii kale, isaga oo ku biiray doorashadiisa isaga oo ah guddoomiyaha Chukotka ee 2000.
Si kastaba ha ahaatee, waxa uu iska casilay guddoomiye kuxigeenka 2008 si uu diirada u saaro guulaha ugu weyn ee uu kula soo wareegay Chelsea FC ee England.
Roman Abramovich Ilmihii Hore Sheeko Xogta Loo Baahan Yahay -Xiriirka Putin
Abramovich wuxuu ahaa qofka ugu horeeyay ee asal ahaan soo jeediya Vladimir Putin ka dib markii madaxweyne ku xigeenkii, Boris Yeltsin. Labadaas ayaa tan iyo markii ay heleen dhul caadi ah oo ku riyaaqaya awooda iyo faa'iidooyinka la xiriira.
Labada duuliye ayaa aad u dhow in Putin uu Abramovich wareysiiyay musharixiinta ugu sareysa liiska golaha wasiirada ee 1999, kaas oo horumariyay su'aalo ku saabsan heerka saameynta Abrahamovich ee saameynta ku leh Putin.
Ku fadhiisashada arrinka, Garsooraha Maxkamadda Sare Elizabeth Gloster wuxuu ku taliyay in Abramovich uu saameyn yar ku leeyahay Putin. Sida ay sheegtay;
Mr Abramovich wuxuu sheegay in Mr Abramovich uu ku guuleystey in uu ku guuleysto abaalmarintaas oo uu ku guuleystey, goolasha. "
Roman Abramovich Ilmihii Hore Sheeko Xogta Loo Baahan Yahay -Iibsiga Chelsea
Abramovich wuxuu Chelsea ku soo iibsaday 2003 intii uu ahaan lahaa gudoomiyaha gobolka Chukotka. Sida laga soo xigtay isaga oo iibsanaya koox ka dib markii uu kuftay London (gurigiisa labaad) wuxuu ahaa mid ka baxsaday caajis, laakiin dad badan ayaa aaminsan in ujeedada uu u leeyahay inay si qarsoodi ah u helaan.
Heshiiska Chelsea ee gacanta u galiyay oligarch ayaa lagu soo gabagabeeyay daqiiqado 15, waqti gaaban oo siiyay Roman aqoonsi caalami ah oo ka baxsan mucaaradka maxalliga ah ee Russia.
Si dhaqso ah ayey u socotaa, Roma oo ah kooxdii hanatay hanaanka horyaalka ee kooxda ayaa bedeshay mid ka mid ah kooxaha ugu waa weyn aduunka. Intaa waxaa dheer, wuxuu u muuqdaa inuu si daacadnimo ah u helay inuu ka baxsado caajisnimada taas oo ka mid ah sababaha kale ee keentay inuu iibsado kooxda.
Hubinta FACT Thanks for reading our Roman Abramovich Sheeko carruurnimo oo lagu daray sheekooyin qeexan. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku haboonayn maqaalkani, fadlan dhiibo faallooyinkaaga ama nagala soo xiriir!
Taariikhda Kubadda Cagta
Sheekooyinka Carruurnimada Sheekh Mansour Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Lorenzo Sanz Childhoood Story Plus Xaqiiqooyinka Untold Biography
Aleksander Ceferin Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Malcolm Glazer Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xadidan
Cenk Tosun Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha Xogta
Aleksandr Golovin Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Michel Platini Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Taariikhda wax laga beddelay: 27-ka Meey, 2020
Taariikhda wax laga beddelay: 23-ka Meey, 2020
Taariikhda wax laga beddelay: 22-ka Meey, 2020
Taariikhda wax laga beddelay: 15-ka Meey, 2020
Taariikhda wax laga beddelay: 13-ka Meey, 2020
Arda Turan Storyhood Story Sheekooyinka dhabta ah ee aan la sheegin
Taariikhda wax laga beddelay: Maarso 6, 2019
Sheekada Carruurnimada ee Son Heung-min Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Aan La Soo Gudbin
Taariikhda wax laga beddelay: 16-ka Meey, 2020
Romain Pavlyuchenko Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Taariikhda wax laga beddelay: Diseembar 18, 2017
Fyodor Smolov Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-hadal aan la isku qorin
Taariikhda wax laga badalay: July 23, 2018
Shinji Kagawa Sheeko Xeeldheer Xogta Warka Xogta
Ryo Miyaichi Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawirka